बस दुर्घटना अपडेट: दुर्घटनामा भाग्यले बाँचेका बसभित्र रहेका अर्का चालकले खोले यस्तो रहस्य ! – Enepali Samchar
बस दुर्घटना अपडेट: दुर्घटनामा भाग्यले बाँचेका बसभित्र रहेका अर्का चालकले खोले यस्तो रहस्य !
November 14, 2020 adminLeaveaComment on बस दुर्घटना अपडेट: दुर्घटनामा भाग्यले बाँचेका बसभित्र रहेका अर्का चालकले खोले यस्तो रहस्य !
धनगढी: विहिबार दार्चुलाको गन्नाबाट पवनदूत यातायातको ना५ख ५१४१ नम्बरको बस मध्यान्न १२ बजे महेन्द्रनगरका लागि छुटेको थियो । सोही बसमा अछामका अमृत कुमाल सवार थिए । दार्चुलामा स्काभेटर चलाउने उनी तिहार मनाउन अछाम घर जादै थिए ।
दुर्घटना भएको बसमा यात्रुको संख्या धेरै नभएको बताउने उनले बस थोत्रो रहेको सुनाए । ‘६ जना बस्न मिल्ने पछाडी सिटमा हामी ३ जना मात्रै थियौं । बस पाटन बजारबाट माथि चड्दा बिस्तारै गुडिरहेको थियो । बस बीच–बीचमा रोक्किरहेको थियो’ उनी भन्छन् , ‘गाडीमा केही न केही समस्या छ भनेर उत्रिन खोजेको चै हुँ तर बिस्तारै लगिहाल्छ होला भन्ने लागेको थियो ।’
सानो घुम्तीबाट बस ६ सय मिटर जति तल खसेको र दुर्घटनाको कारण खुल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) नारायण प्रसाद अधिकारीले बताए । न्युज श्रोत – दिनेश खबर
माल्दिभ्समा हनिमुन मनाइ रहेकी काजल अग्रवालले सार्वजनिक गरिन दुनियालाई चकित पार्ने यस्ता तस्विरहरु ….
संसदीय दलमा पराजित भए प्रतिपक्षमा बस्ने ओलीले गरे यस्तो संकेत